December 2017 – Page 15 – ရွှေမြန်မာတို့အတွက် ရွှေမင်္ဂလာ
စားသောက်ဆိုင် ဝန်ထမ်းသုံးဦး ဝိုင်းဝန်းထိုး`ကြိတ်ရိုက်နှက်ရာမှ အရက်လာသောက်သည့် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံး
မော်လမြိုင်မြို့၊ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်ရှိ ကောင်းသစ်စံ စားသောက်ဆိုင်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် ည ၁၂ နာရီခန့်က စားသောက်ဆိုင်ဝန်ထမ်း သုံးဦး ဝိုင်းဝန်းထိုး`ကြိတ်ရိုက်နှက်ရာမှ အရက်လာသောက်သည့် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မြိုင်သာယာနယ်မြေရဲစခန်းမှ သိရသည်။ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်နေ ဝင်းဇော်ဦး ၄၀ နှစ်နှင့် နေမင်းထွန်းတို့နှစ်ဦးမှ ယင်းရပ်ကွက် ရာဇဓိရာဇ်လမ်းရှိ ကောင်းသစ်စံ စားသောက်ဆိုင်သို့ အရက်သွားသောက်ကြရာမှ ၎င်းဆိုင်ရှိ စားပွဲထိုးဝန်ထမ်းများနှင့် စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ရာ ဆိုင်ဝန်ထမ်း သုံးဦးက ဝင်းဇော်ဦးကို ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှိက်ခဲ့ကြောင်း Read More
တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ #သိကြားမင်း ဂါထာတော် ဝေဒါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု ဝေ = ငါ၏ရန်သူ ဟူသမျှတို့သည် …. ဒါ = ဝေးစွာသော အရပ်သို့ …. သာ = လျင်စွာ …. Read More
မြန်မာမဆန်တဲ့မျက်နှာ အတွက် မိဘတွေကိုကျေးဇူးလိုက်တဲ့ ဇာဇာထက်
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ Photoမော်ဒယ်အဖြစ်ခေတ်စားနေတဲ့ ဇာဇာထက် ဟာ သူမရဲ့ မျက်နှာကျကို မြန်မာမဆန်အောင် မွေးထားပေးလို့ မိဘတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် လှပကျော့ရှင်းသူဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေ ၀န်းရံထားတဲ့ သူလဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ရဲ့ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာမှာ Follower ၃သိန်းနီးပါး ရှိနေပြီး သူမ ဟာလဲ လူသိများတဲ့ ဆယ်လီ စာရင်းဝင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ လှနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို Read More
သိကြားမင်းဂါထာတော်​ တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်
ရွှေမင်္ဂလာမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများကို နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေလို့ see first လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ အလွယ်တကူဖတ်ရှုလို့ရအောင်လည်း လုပ်ပေးထားဖြစ်လို့ နေ့စဉ်ဖတ်ရှုပေးကြပါနော်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ရွှေမင်္ဂလာမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများကို နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေလို့ see first လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။ အလွယ်တကူဖတ်ရှုလို့ရအောင်လည်း လုပ်ပေးထားဖြစ်လို့ နေ့စဉ်ဖတ်ရှုပေးကြပါနော်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
လက်ရှိချစ်သူ လက်ရှိ အိမ်ထောင်ရေး မှာ တစ်သက်လုံး_လက်တွဲသွားမယ်လို့_ဆုံးဖြတ်ထားရင်_ ဒီ_၆_ချက်ကို_သိထားဖို့လိုတယ်
လက်ရှိချစ်သူ လက်ရှိအိမ်ထောင်ရေးမှာ တစ်သက်လုံး_လက်တွဲသွားမယ်လို့_ဆုံးဖြတ်ထားရင်_ ဒီ_၆_ချက်ကို_သိထားဖို့လိုတယ် ၁။ ခေါင်းအေးအေးထား စဉ်းစား ။ ဟုတ်တယ်။ ငါတို့ ခေါင်းအေးအေးထားရမယ်။ တကယ်တော့ ငါတို့ ရန်ဖြစ်ကြတာ ခဏတာလေးပါ။ ဒီခဏလေးပြီးရင် အကြာကြီးဝေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ငါတို့ရန်ဖြစ်တာရော၊ ဘာကြောင့်လဲ။ လမ်းခွဲဖို့လောက်ထိရော၊ ဖြစ်သင့်ရဲ့လား။ ဘာတွေကြောင့် ဒီအခြေအနေတွေအထိ ဖြစ်လာခဲ့လဲ။ ငါတို့ ခေါင်းအေးအေးထားပြီး စဉ်းစားမယ်။ ၂။ မှားတဲ့သူ တောင်းပန်ကြေး။ ချစ်သူရေ.. ဘယ်သူမဆို ကိုယ်မှားတာကို တာဝန်ယူမှ၊ Read More
ခင်ပွန်းဖြစ်သူအတွက် ခိုင်သင်းကြည် ရဲ့ ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ မခိုင်လေးကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ခပ်ချွဲချွဲလေူပဲ မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။ Happy Birthday အချစ် ❤️ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ မိသားစုနဲ့ အတူမွေးနေ့ ပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ😘 ဆိုပြီး မခိုင်လေးကတော့ ချွဲချွဲနွဲ့နွဲ့လေး ဆုတောင်းထားပါတယ်။ သမီးဖြစ်သူ စံထိပ်ထားကလဲ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဖေဖေ။ သူမအတွက် တစ်ဦးတည်းသော ဟီးရိုးပါဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းထားပါတယ်။ ကိုခန့်နိုက်ကတော့ ဇနီးချောနဲ့ သမီးလိမ္မာလေးရထားလို့ ပျော်နေတော့မှာပါပဲ။ သူတို့မိသားစုလေးက လူတကာ အားကျစရာ ကောင်းလောက်အောင် နွေးထွေး ချစ်ခင်ကြတဲ့ Read More
ဖင်ပြတာ နာမည်ကြီးချင်လို့လား ဆိုတဲ့ သန္တာဗို
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကိတ်ကြောင်းပြတဲ့ ကောင်မလေးတွေအရမ်းကိုများနေပြီး တင်အသားပေးပုံလေးတွေ ၊ ဗွီိဒီယိုအတိုလေးတွေ ခေတ်စားနေပြီး ပုရိသတွေကလဲ အရမ်းကို ကြွေနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒိခေတ်စားနေတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သန္တာဗို က သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ စာတချို့ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီစာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူမရဲ့ အနုပညာလောကထဲက လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေရော၊ ပရိတ်သတ်တွေကပါ ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ သူမက ” ဖင်ပြပြီး နာမည်ကြီးချင်တာလား ? Like များချင်တာလား ? ” Read More
“ မင်းကွန်း ဆရာတော်ကြီး မိခင်ကြီးကို ဂရုစိုက်ပုံ”
ဆရာတော်သည် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်သို့ လှည့်လည် တရားဟောစဉ် တရားနာပရိသတ်ထဲ၌ မိမိ၏မိခင်ကြီး “ဒေါ်ဆင်” နှင့် သက်တူရွယ်တူ အမျိုးသမီးများ ပါ၍ သူတို့ ဝတ်ထားသော အဝတ်အစားကလည်း မိခင်ကြီးနှင့် လိုက်ဖက်မည် ထင်လျှင် “သည်အဝတ်အစားနာမည် ဘယ်လိုခေါ်ကြောင်း၊ ဘယ်နေရာတွင် ဝယ်၍ ရနိုင်ကြောင်း”စသည်ကို အခြားသူများ မသိစေဘဲ မိမိတပည့်များကို ထိုအမျိုးသမီးများထံ တိုးတိုးတိတ်တိတ် သွားရောက် မေးမြန်းစေသည်။ ထို့နောက် ကျောင်းပြန်ရောက်သည့်အခါ တပည့်များကို ထိုအဝတ်အထည်မျိုး အဝယ်ခိုင်းပြီး Read More
ထိုင်းမှာ CI စာအုပ် လုပ်ရင်း ခေါင်းပုံဖြတ်ခံနေရတဲ့ မြန်မာ တွေ
“အခု ကျနော်တို့က ပွဲစားတွေကို CI စခန်းမှာဘဲ ပေါ်တင်ကြီး ပိုက်ဆံတွေ ပေးနေရတယ်။ ကျနော်တို့က မပေးချင်ဘူး။ မပေးလို့ CI စာအုပ် မရရင် ကျနော်တို့ပဲ ဒုက္ခရောက်မှာလေ ဒါကြောင့် ပေးလိုက်ရတာပဲ” လို့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ အများစု အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင် ဒေသက စက်ရုံ တခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကိုကျော်စိုး က သူ့အတွေ့အကြုံကို ရှင်းပြပါတယ်။ Certificate of Read More
သရုပ်ဆောင် မေသန်းနု ၏ နေအိမ်ခြံတံခါးကို ကားဖြင့်တိုက်ဖွင့်ပြီး ခြံဝင်းအတွင်းရှိကားကို ရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးသူအား အမှုဖွင့်ထားပြီး အာမခံပေးကာ စစ်ဆေးနေ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် သရုပ်ဆောင် မေသန်းနု ၏ နေအိမ်ခြံတံခါးကို ကားဖြင့်တိုက်ဖွင့်ပြီး ခြံဝင်းအတွင်းရှိကားကို ရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးသည့် အမျိုးသားအား သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားပြီး အာမခံပေးကာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆက်လက်စစ်ဆေးနေကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ သရုပ်ဆောင်မေသန်းနု နေထိုင်သည့် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် (၂၇) ရပ်ကွက် ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ အပိုင်း (၁) ရှိ နေအိမ်သို့ နိုဝင်ဘာ Read More